किन खाने भिन्डी ? यस्ता छन् महत्वपूर्ण फाइदाहरु ! – MediaNP
शुक्रबार, १३, बैशाख, २०७६
किन खाने भिन्डी ? यस्ता छन् महत्वपूर्ण फाइदाहरु !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:१६0
भिंडी गर्मी मौसममा पाइने एक मिठो तरकारी हो । यो जति मिठो छ, त्यत्तिकै स्वाथ्यको लागी पनि फाइदाजनक छ । गर्मी मौसममा भिंडीलाई दालको रुपमा रस हाली खाने बानी पनि धेरै नेपालीहरुको छ । यो चिप्लो हुने भएकाले यसलाई चिप्ले भेन्टीको नामबाट पनि चिनिन्छ । विशेषगरी भेंडीमा भिटामिन ‘सी’ भरपुर मात्रामा पाइनेकारण हप्ताको ४ चोटी तरकारी वा दालको रुपमा सेवन गरेमा थकान, तनाव जस्ता समस्या समधान हुन्छ । यसको साथमा भिंडी सेवन गर्दा यस्ता हुन्छन् फाइदाहरु ः
क्यान्सरः भेंडी सेवन गर्नाले शरीरमा रहेको विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन्छ र क्यान्सर बन्ने कोषिका बन्न रोकिएर क्यान्सर लाग्ने खतरा रहदैन् ।
मुटुरोगः भिंडीमा मजबुद पैक्टिन कोलस्टोर हुन्छ, जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ । यसको साथमा घुलनशील किसिमको फाइबर पाइनको कारण रगतको सफाइ गरी कोलस्टोर नियन्त्रण समेत नियन्त्रण गर्दछ ।
डाइबेटिजः डाइबेटिज भएकाको लागी भिंडी एक विशेष औषधीनै हो । यसलाई रातको समयमा एक गिलास पानीमा एउटा भिंडी चिरेर त्यस पानीमा भिजाइ विहानको समयमा त्यो पानी सेवन गर्नाले निकै फाइदा हुन्छ । दैनिक रुपमा यसलाई सब्जी वा सुप बनाएर सेवन गर्दा पनि लाभ मिल्दछ ।
एनिमियाः भिंडीमा आरन पाइन्छ, यसले होमोग्लोबिनको निमार्ण गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्दछ । त्यस्तै भिटामिन के पनि पाइने कारण रक्तश्राव रोक्नेलाई समेत सघाउँछ ।
पाचनतन्त्रः भिंडी भरपुर रुपमा फाइबर भएको सब्जी हो । यसले पेट फुल्ने, कब्जियत, पेटको दुखाई वा ग्यास्टिकको समस्या नगराई पाचतन्त्रमा कुनै खराबी आउन दिदैन् ।
हड्डीः भिंडीमा भिटामिन के पाइन्छ , यसले हड्डीलाई निकै बलियो बनाउने काम गर्दछ ।
इम्युनिटी सिस्टमः भिंडीमा भिटामिन ‘सी’को साथमा एन्टीअक्सिडेन्ट पाइने कारण इम्युनिटी सिस्टम बलियो हुन्छ । यसको साथमा भेंडीले त्वचालाई जवान राख्न, कपाल घना,चमकदार बनाउन, तौल नियन्त्रण गर्न, त्वचा जवान बनाउन र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, तर भिंडीमा ओजलेट अत्याधिक मात्रामा पाइने कारणले पित्तमा पत्थरी हुने सम्भावना अधिक हुन्छ, त्यसैले अत्याधिक मात्रामा भने भिंडी सेवन गर्नुहुदैन् ।
स्मरण शक्ति कमजोर हुनुको कारण र उपचारविधि !
गर्मीमा पुदिना खानुको स्वास्थ्य लाभ !